admin – Page 3 – Qaran24
Kala Soco Warar Sugan 24'ka Saac
Deg Deg: Faah Faahin Dab Khasaaro Geystay Oo Ka Kacay Suuq Ku Yaalla Muqdisho
Xalay Saqdii dhexe ayaa waxaa dab khasaaro geystay uu ka kacay Suuqa Daryeel ee degmada Hurwaa ee Gobolka Banaadir.
Dabkaan ayaa dadka deegaanka waxa ay sheegeen in uu ka bilaawday Koronto isaga oo geystay inta badan khasaaro Hantiyadeed.
“Dabka koronto ayuu ka bilaawday xalay ilaa saakay waa la deminaayay dukaamin badan ayuu khasaaro u geystay waxaa la waayay damdebis sidhaqso ah ku soo gaara Goobta waxan arkay lacag farabadan oo gubtay ayaan arkay ayuu qof ka mid ah dadka deegaanka”
Ugu dambeyn saakay aroortii ayaa lagu guulestay duminta dalkaas,waxaana haatan socda gurmad ay wadaan Ganacsatada qaar si loo hagaajiyo Suuqa Daryeel ee uu dabka ka kacay.
Inta badan Suuqyada muqdisho markii uu dabka kaco ayaan sidhaqso ah loogu guuleysan demintiisa kadib markii la waayo Gawaarida dabdemiska,dabkii Xalane lama sheegin Khasaaro nafeed oo uu geystay.
Daawo Sawirada: Ra’iisul Wasaare Kheyre Oo Ganacsada Muqdisho Kala Hadlay Khilaafkii Ka Dhashay Bixinta Canshuurta
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo ay wehliyeen Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda,
Mudane C/raxmaan Ducaalle Beyl, Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga Mudane Maxamed Cabdi xayir Maareeye iyo masuuliyiin kale,
ayaa maanta la kulmay qaar kamid ah Gacansatada Soomaaliyeed, waxayna ay kawada hadleen arrimo badan oo dhaqaallaha dalka ku saabsan.
Ra’iisul wasaaraha iyo Ganacsatada ayaa kawada hadlay arrimaha la xiriira bixinta Canshuuraha iyo qaabkii ay uga qeyb qaadan lahaayeen kor u kaca dhaqaallaha dalka.
“Aniga iyo R/wasaare Xasan Cali kheyre waxaa la kulanay Ganacsatada Soomaaliyeed, waxaana kawada hadalnay Bixinta Canshuuraha,
Ganacsatada waxay mudan yihiin qadarin , waana muwaadiniin kasoo qeyb qaatay dib u dhiska dalka iyo horumarka la gaaray, wadashaqeyn ayaan dhammaan ku horumari karnaa” ayuu yiri Wasiir Beyle.
Dhageyso: Soomaaliland Oo Maamulka Khaatuma Kala Wareegtay 200 Oo Askari+Sawirro
Degmada Balicad ee Gobolka Cayn waxaa lagu wareejiyey 200 oo Askari kuwaasi oo ahaa Ciidanka Khaatumo,
balse xiligan wixii ka dambeeya ka mid noqon doona Ciidamada Maamulka Soomaalilnd.
Munasabad Ciidanka lagu Wareejinayey Waxaa ku sugnaa Wasiirka Amniga Khaatumo Keyse Cabdi Yusuf Wasiirka Warfaafinta Khaatumo Axmed Xaaji Cali iyo Masuuliyiin kale.
Masuuliyiin kale oo Katirsan Maamulka Khaatumo Taliyihii Ciidanka Lagu Wareejinayey Aaga Widhwidh Gaanshale Sare C/llaahi Dheere Saraakiil ka tirsan Ciidanka Iyo Waxgaradka Deganakaasi Balicad ayaa dhammaan soo dhaweeyay tallaabadan lagu wareejiyay Ciidamada.
Wasiirka Amniga Khaatumo Keyse Cabdi Yusuf ayaa Ciidanka Wareejiyey Isagoona sheegay In y ka mid tahay Qadobadii ay ku Heshiiyeen Soomaliland iyo Khaatuma ugu dambeyna uu noqday mid fula.
Hoos Ka Dhageyso Codka Kana Daawo Sawirrada.
Deg Deg Dhageyso: Cabasho Ka Timid Ciidamada Booliska Xili Ay Ku Hanjabeen Shaqa Joojin Toos Ah
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Dowlad goboleedka Galmudug ayaa xiligaan waxa ay ka cabanayaan mushaar la’aan soo wajahday taas oo ay sheegeen in jawaab deg deg ah laga bixiyo.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Booliska Galmudug oo Warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in mudo Saddex Sano ah aysan helin wax mushaar ah isla markaana aysan helin cid ka jawaabtay cabashadooda.
Waxa ay sheegeen in ay ku Shaqeeyaan duruufo adag sida in aysan helin xaquuqdooda,Daryeel Mushaar,
Guno iyo wax la mid ah,waxa ayna dalbadeen in Madaxda Galmudug ay jawaab deg deg ah ka bixiyaan cabashadooda.
Ciidamadaan ayaa sida aan Wararka ku heleyno waxa ay gaarayaan ku dhawaad 300 oo Askari kuwaas oo sheegay in hadii aan laga jawaabin cabashadooda isla markaana aysan helin xaquuqdooda ay Shaqa joojin sameyn doonaan.
Hoos Ka Dhageyso Codadka Saraakiisha Ciidamada Booliska Galmudug.
DEG-DEG:- Xildhibaanada Sool oo farriin culus udiray madaxweyne Gaas, xaalad cusub oo kasoo korortay Tukaraq iyo madaxda sare Puntland oo xilkoodii halis ku jiro.
Xidlhibaanada barlamaanka dowladda Puntland ee kasoo jeeda gobolka Sool, ayaa si deg deg ah u dalbaday inuu madaxweyne Gaas hor yimaado kulan aan caadi ahayn oo looga hadlayo cago jiidka xukuumada ee arrimaha Tukaraq.
Xildhibaanadaan ayaa si weyn uga xanaaqsan sababta ay dowladda Puntland uga jawaaabi la’dahay duullaankii qaawaanaa ee maamulka Somaliland uu ku qabsaday degmada Tukaraq, hadana uu weli car car usoo hayay inuu yimaado Yoocada Garowe.
Mudanayaashu waxay ku hanjabayaan inay gudbinayaan mooshin ka dhan ah madaxda sare ee dowladda Puntland, kuwaas oo lagu eedeeynayo inay dadkii iyo dalkiiba dayaceen islamarkaana aan laga aamusi karin xaalada Puntland ay haatan ku sugan tahay.
Waxaa kale oo ay ammaan ujeediyeen beelaha reer Puntland oo iskood iskusoo xilqaamay islamarkaana ciidan iyo hub usoo diray gobolka Sool si ay qeyb uga qaataan xoraynta gobolka Sool,
laakiin waxay intaas ku dareen in ciidankii isaga kala yimid gobolada Puntland oo dhan ay ku daadsan yihiin jiida hore ee Tukaraq, halkaasna uu ku haysto dayac faro badan, qarashna badan uu ku baxay.
Madaxweyne Gaas ayaa berrito imaanaya Garowe, waxaana la filayaa inuu ka hadlo arrimaha haatan ka taagan Puntland iyo dhaliilaha loo jeediyay.
DEG DEG:(DAAWO)Dowladda federaalka Somalia oo gudaha u gashay Buuhoodle & Ciidamadii ka goostay Somaliland oo ku biiray Ciidamada Xogga dalka + Xiisad culus oo……..
Magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxaa ka socda qorista iyo abaabulka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo qaarkood dhawaan ku biiray dowladda Soomaaliya kadib markii ay kasoo goosteen dhanka ciidamada maamulka Somaliland.
Gudoomiyaha degmada Ceegaag ee gobolka Cayn ugu magacaaban maamulka Somaliland oo warbaahinta kula hadlay gudaha degmadaasi ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan arimahaasi isla markaasna dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo ka qoranayso deegaano hoos yimaada magaalada Ceegaag iyo sidoo kale deegaanka Buuhoodle kuwaas oo xiisad culus ka dhex abuuray deegaankaasi.
DEG DEG:(Daawo Muuqaal) Dagaal khasaare sababay oo ka dhacay gudaha magaalada Laascaanood & Beel kamid ah Beesha Dhulbahante oo Ciidamada Somaliland……
Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacay dagaal xoogan oo dhex maray ciidamada maamulka Somaliland iyo Beel kamid ah Beelaha Dhulbahante,
waxaana dagaalkani oo ka dhacay gudaha magaalada Laascaanood uu yimid kadib markii ay dumiyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda hoose ee magaalada Laascaanood goobo ganacsi oo ku yaalay suuq kamid ah suuqyada magaalada Laascaanood.
Dagaalkani oo dhex maray ciidamada maamulka Somaliland iyo Malayshiyaad Beeleed kasoo jeeda Beesha Khayr Cabdi (Qayaad) ee Dhulbahante ayaa waxaa arintaasi ka hadlay qaar kamid ah waxgaradka Beeshaasi oo sheegay in ciidamada maamulka Somaliland ay weerar qaawan kusoo qaadeen dhulal ay iyagu iska lahaayeen.
War Deg deg Ah:Jabhadda ONLF oo war culus kasoo saartay hadalkii madaxweyne Farmaajo ee ku sabsanaa arrinta Qalbi Dhagax + Xaasaskii & Carruurtii Qalbiga oo Muqdisho laga musaafuriyay…
Afhayeenka Jamhada ONLF C/qaadir Xasan Hirmooge ayaa mas’uuliyado daro iyo qiyaano qaran ku tilmaamay jawaabtii madaxweyne Farmaajo uu ka bixiyay dhiibistii C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi-dhagax) oo Dowladiis ay u gacan galisay Itoobiya.
Afhayeenka ONLF ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu baalmaray in uu qirto danbiga uu dadka iyo dalka ka galay ee ah in Muwaadin uu u gacan galiyey Shisheeye wuxuuna tilmaamay Farmaajo la haa go’aankii lagu dhiibay qalbi-dhagax.
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayuu sheegay in uu yahay madaxweynihii ugu horeeyey ee shisheeye u gacan galiya Muwaadin Soomaaliyeed.
Dhankale Afhayeen Hirmoog ayaa Ciidanka Nabad sugida ku eedeeyey inay magaalada muqdisho ka cayriyeen Xaasaskii iyo Caruurtii Generaal Qalbi-dhagax kadib markii ay dhowr jeer u dhaceen guryadooda.
Madaxweyne Farmaajo uu u dabaal dagay sanad guuradiisi koobaan ee inta uu talada dalka hayo ayaa dalka oo idil waxaa laga dareemayaa in bulshada Soomaaliyeed ay wali ka tiiraanyeysan yihiin dhiibistii C/kariim Sheekh muuse oo ka mid ahaan jiray Saraakiishii Ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed guutooyinka ka dagaal galay 1977-dhulka Soomaaliya ee Itoobiya maamusho.
WAR DEG DEG AH:Wararkii ugu dambeeyey ee Dagaalka Tukaraq & Ciidamada Puntland oo qabsaday fadhiisimo hor leh + Saldhigyadii Somaliland oo….
Wararkii ugu dambeeyey ee maanta aanu ka helayno deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in dhaq dhaqaaqyadii ugu xooganaa ee ciidan ay kawadaan deegaankaasi ciidamada Somaliland iyo Puntland.
Wararku waxa kale oo ay intaasi kusii darayaan in ciidamada Puntland oo ku gaashaaman gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ay qabsadeen fadhiisimo ciidan oo hor leh kuwaas oo ay hore ugu sugnaayeen sida la sheegay ciidamada maamulka Somaliland.
Inkastoo la wareegista fadhiisimadaasi uusan ka dhicin wax dagaal ah hadana xiisadaha dagaal ee u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland waa kuwo sii xoogaysanaya,
waxaana maanta socda diyaar garow culus kaas oo ay wadaan labada dhinac oo laga yaabo in dagaal xoogani uu ka dhex qarxo.
Jiidaha hore ee dagaalka qaarkood ayaa lasoo sheegayaa in ay isku soo dhowaadeen ciidamada Somaliland iyo Puntland,
kadib markii ciidamo ka tirsan Puntland ay gaadheen deegaano hor leh oo dhaca Miyiga amaba Baadiyaha deegaankaasi Tukaraq.
Goobaha la isku hor fadhiyo qaarkood ayaa masaafo ahaan isku jira wax ka yar 4 KM, waxaana xusid mudan in ciidamada Puntland iyo Somaliland ay is kulaalayaan xili walbana uu dhici karo dagaal culusi.
DEG DEG:(DAAWO)Dowladda Somalia oo mar kale gudaha u gashay deegaano ka tirsan Somaliland & Saraakiil ka bilowday Gobolka Sanaag qorista ciidamadii ugu badnaa ee lagu wareerayo……
Saraakiil ka Socdey Wasaaradda Gaashaan dhigga Dawlada Federaalka Soomaaliyeed iyo xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay weheliyaan qaar ka mid ah saraakiisha Ciidanka Daraawiishta Puntland ayaa soo gaadhey gobolka Sanaag.
Waxa soo dhoweeyey Taliyaha Qaybta 9aad ee Ciidanka Daraawiishta Gobolka Sanaag Col. C/laahi Cumar Cashuur oo ay ugu socdeen iney diiwaan geliyaan ciidankiisa ku sugan meelo badan oo gobolka ah.
Safarkooda ayaa waxa ku weheliyey shaqaalaha Salaam Bank oo iyagu xogta ciidanka qaadanayey si Akoono loogu furo askara Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee qaybta Sanaag.
Weftigan ayaa kolkii ay shaqadooda soo dhamaysteen waxay gurigiisa ku booqdeen Suldaan Siciid Suldaan C/salaam oo ay la joogeen Gudoomiyaha Gobolka iyo madax kale oo heer gobol ah.
Soo dhoweyn iyo isbarasho kadib waxa weftigu tilmaameen iney ku faraxsan yihiin safarkooda gobolka Sanaag iyo shaqadoodii oo si hufan oo nabad ah ugu dhamaatay .